Degmooyinka dalka oo ka qeyliyey rag qaan-gaar ah oo xarumaha carruurta la dejiyo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Degmooyinka dalka oo ka qeyliyey rag qaan-gaar ah oo xarumaha carruurta la dejiyo
La daabacay onsdag 8 juni 2016 kl 16.23
"Waxaa ku jira kuwo cirro leh"
Xarumaha la dejiyo dhalaanka eklinimada ku yimaada. Foto: Jessica Gow / TT
Degmooyinka dalka qaarkood ayaa ku doodaya in dhalanka keligood yimaada ee la dejiyo xarumaha HVB-hem ay u badanyhiin kuwo u eg una dhaqma sida dad qaan-gaar ah.
Saas oo ay tahay ayeysan jirin sharuuc shaqeyneysa oo degmooyinka ay adeegsan karaan, sida laga soo xigta ururka kulmiya degmooyinka iyo gobalada dalka SKL.
Laanta Ekot ayaa saakey baahisay in ay hubaal la’aan ka heysato howlwadeenada hey’adda sida ay u qiimeeyn lahaayeen da’da ay jiraan dhalaanka kelinimada ku yimaada marka ugu horeysay ee ay la kumaan. In aysan jirin xeer ama dhabotus lagu qiimeyn karo da’da dhalaanka kelinimada isku-dhiiba waxay sababtay in dad qaan-gaar ah carruur la dejiyo xilli lix bilood ka badan, sida ay sheegtay Åsa Furén Thulin madaxa waaxda caafimaadka iyo daryeel ee ururka kulmiya degmooyinka iyo goblada dalka SKL.
– Maanta waxaa jira dhallinyaro qaan-gaar ah oo lagu hayo xaruumo loogu talogalay dhalaanka kelinimada u yimaada. Annaga ayaa booqdey 19 gobol oo arrimahan wax ka weydiiyey, mar kastana arrintan laygu soo celeclinayey, waxaa jira degmooyin badan dhibaatadan heysato, ayey tiri
Degmooyinka qaarkood ayaa ugu dembeyn ku qasbanaada in ay shaqsiyaad ay u arkaan qaan-gaar ka ceyriyaan xaruumaha carruurta loogu talogalay, halka degmooyinka qaarkood kale ay arrintan faraha ka qaadaan, sida ay tiri Åsa Furén Thulin
– Ma ahan keliya xaruumaha carruurta balse sidoo kale iskuulada. Rag qaan-gaar ah oo dhiganaya iskuulada carruurta, waa wax lala yaabo, iskuuladana waxaa dhigta gabdho yaryar ooc arruur ah. Macallimiinta dhib ayey ku noqoneysaa sidii ay u maareyn lahaayeen arrintan, ayey tiri.
Degmooyinka ayaa ku kalo gedisan sida ay arrintan ula tacaalan. Degmada Helsinborg ayey Irena Sandqvist oo ah madaxa waaxda bulshada ku qiyaastay in boqolkii 20 dhalaanka kelinimada ku yimid ee ay degmada heyso ay yahiin qaan-gaar, taas oo ah tiro u dhiganta 80 ka mid ah 300 dhalaan kelinimo ku yimid ay yahiin dad qaan-gaar ah balse isku dhiibay carruur in ay yahiin.
– Aad ayaan ugu kalsoonahay qiimeynta aan sameynay.
- Waxaan ku aragnay qaar cirro leh, taas ah caddeyn aan marag kale u baahneyn, ayey tiri
Sida ay Irena Sandqvist sheegtay degmada Helsingborg ayaa dacwo ka gudbisay iskudey kufis oo lagu tuhmay mid ka mid ah dadkan dhalaanka isku-dhiibay oo faroxumeyn rabay gabar yar oo carruur ah. Xagaagan ayaa la qorsheynayaa in degmada Helsingborg laga hirgeliyo xarun kale oo lagu hayo dhalanka kelinada ku yimaada kuwas oo qarkood yahiin qaan-gaar isku-dhiibay carruur laakiin degmada aysan waxbo ka sameyn karin maadaama hey’adda socdaalka diiday in loo wareejiyo dadkan isku-dhiibay carruur xaruumaha lagu hayo dadka qaan-gaarka ah.
– M ahan wax caqli gal ah, waa in xal kale la helaan, wado-hadal ayaa noo socda hey’adda Migrationsverket si dhallinyaradan loogu wareejiyo xaruumaha lagu hayo magangeliyo doonka qaan-gaarka ah. Ayey tiri Åsa Furen Thulin oo ka socota ururka SKL
onsdag 8 juni 2016 kl 12.11
onsdag 8 juni 2016 kl 12.26